Wasiirka Maaliyadda oo sheegay inuu diyaar u yahay ka jawaabista su’aalaha Guddiga Maaliyadda – Kalfadhi
Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa ka jawaabay Warbixin Maaliyadeed uu saaray Guddiga Miisaaniyadda, Maaliyadda, Qorshaynta iyo La-Xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee Golaha Shacabka. Asaga oo u warramayey Warbaahinta Dowaladda ayuu wasiirku sheegay in, isaga oo aad u ixtiraamaya aqoosanna doorka Guddigaas, ay Wasaaraddu tahay cidda kaliya ee jawaabaha saxda ah bixin karta, isla markaana ay hadda diyaar u yihiin ka jawaabista su’aalaha uu Guddigu soo bandhigay.
Wasiir Bayle oo ay hadalkiisa ka muuqato dhaliil uu u qabo qaabka uu Guddigu wax u soo bandhigay, ayaa ku macneeyay is fahmiwaa iyo in aysan xisaabaadku sax ahayn, waxa uuna daliishaday in Hay’adda Lacagta Adduunka ee IMF iyo Bangiga Adduunku ay ku amaaneen habka Wasaaraddu ku dhaqanto, “isla markaana” ayuu yiri “si daahfurnaan ah, oo aan cidna ka qarsooneyn ay wasaaraddu wax u maamusho”. Sidoo kale, waxa uu Wasiirku sheegay in lacagaha Sacuudiga laga helay iyo kuwa Turkiga ka imaanayaba ay maraan hab xisaab celineed daahfuran.
Mar la weydiiyay arrinta Maamulka Gobolka Benaadir, oo miisaaniyaddii loo qoondeeyay aan la siin, ayuu wasiirku sheegay in ay isla eegi doonaan oo uusan hadda xog fiican ka hayn. Isaga oo difaacanaya Dakhli kororkii uu hadda kahor sheegay, balse ay Guddiga Maaliyaddu beeniyeen, ayuu wasiirku yiri “waa muuqataa sida uu dakhligu u kordhay”. Xawaaladaha iyo Bangiyada ayuuse Wasiirku qirtay inaan laga qaadin caanshuurtii loo qoondeeyey.
Sida muuqata, waxaa kala duwan macluumaadka uu Guddigu soo bandhigay oo tilmaamaya in uusan jirin dhaqaale ururin korortay, taas oo ka soo horjeedda warbixinta ay soo saareen IMF iyo Bangiga Adduunka, oo sheegaysay in dakhligu kordhay, Wasiirka ayaase ruuxiisu qiraya in meelaha qaar oo uu Qaadku ka mid yahay ay hoos u dhac dakhli kala kulmeen, hase ahaatee waxa uu wasiir Beyle yiri “wey caddahay in dakhli kordhay”.
Wasiirka, oo amaanaya doorka ay wasaaraddu ciyaartay, ayaa sheegay in ay ammaan kala kulmeen Beesha Caalamka, sida Midowga Yurub, Bangiga Adduunka iyo Hay’adda Lacagta Adduunka, “kuwaas oo dhamaan ku bogaadiyay” buu yiri “hab-maamulka maaliyadda dalka oo soo hagaagaya”. “Waana taas” ayuu yiri Wasiir Beyle “waxa mudan in loo dabaal dego, oo lagu ammaano dadka shaqadaas wanaagsan qabtay”.
Guddiga Miisaaniyadda, Maaliyadda, Qorshaynta iyo La-Xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee Baarlamaanku DFS, ayaa warbixintooda aad ugu dhaliilay Wasaaradda Maaliyadda, waxa ayna dalbadeen in Wasiirku Golaha Shacabka hortiisa uga jawaabo dhamaan su’aalaha warbixintooda ku jira.